how to upgrade Notebook GPU! — MYSTERY ZILLION
how to upgrade Notebook GPU!
ကျနော့် Notebook Built in Graphic card HD Intel(R) Graphics 5500 Total Memory 3839 ပါ။ Monitor display 1366 x 768 ပါ။ ဒီဟာနဲ့Star Wars Battlefront ဆော့လို ့မရဘူးလို ့ထင်ပါတယ်။ Notebook Graphic card ကို အသစ်လဲချင်ရင် ဘာတွေသိသင့်ပါသလဲခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ (Lenovo ThinkPad E450)။ Service Center မပို ့ပဲ မိမိဘာသာ ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်၊
Notebook , laptop တွေက graphic card , CPU စတာတွေက desktop လိုမျိုး လဲလို့ မရပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် memory , hard disk ပဲ လဲလို့ ရပါတယ်။